Q & A – စာမကျြနှာ9– Healthy Life Journal
———၊ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၊——— Q. အခုဆိုရင် လူတန်းစားမျိုးစုံမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ အဖြစ်များနေတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ကလေးရဲ့  သဘောသဘာဝကိုက လူကြီးနဲ့စာရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအားဖြင့် အားနည်းတယ်၊ အားနည်းတော့ လူကြီးနဲ့စာရင်...
ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေတယ် ဆရာ (Double Vision)
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိက ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါလဲ၊ နှစ်ထပ်မြင်တာက ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတာလား။ ကုသလို့ရနိုင်ပါသလားဆရာ။ A. မျက်စိက ကြည့်လိုက်လို့...
အသက်ကြီးချိန်မှာ ခါးမကုန်းအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်သလဲ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ခါးမကုန်းအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆရာတို့ဆီမှာ အမြဲလိုလို အတွေ့ရများတဲ့ အရိုးပါးရောဂါကြောင့် ခါးကုန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်မှုက အဓိကပါပဲ။ အရိုးပါးရောဂါကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီတွေ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ကြွက်မတက်စေဖို့ …
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကြွက်မတက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ မဂ္ဂနီစီယမ် ဖြည့်စွက်စာတွေ လိုအပ်ပါမယ်။ ဆရာတို့နိုင်ငံမှာ ဒီဖြည့်စာတွေ ပိုပြီးတော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေစားပေးရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကြွက်တက်တာကို...
နာတာရှည် ရင်ခေါင်းအောင့်နေတဲ့ လူနာအကြောင်း . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဆရာ့အတွေ့အကြုံအရ ရင်ခေါင်းအောင့်တဲ့ ဝေဒနာကို နာတာရှည်ခံစားနေရတဲ့ လူနာရှိရင် သိပါရစေ။ A. ရင်ခေါင်းအောင့်တဲ့ ဝေဒနာကို အကြာကြီး ခံစားနေရတဲ့ လူနာတစ်ဦး အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူက ဘားအံဘက်က...